2021 Amaala Saint Lucia
Itinye aka na Mmemme Investment Saint Lucia bụ nhọrọ kachasị ọhụrụ na nke kachasị mma maka inweta amaala na akwụkwọ ikike gọọmentị (paspọtụ) na Caribbean.
N'ala ọtụtụ, kemmasi, agaghị echefu echefu Saint Lucia bụ nanị, iwu zuru oke.
ọ dịghị mkpa ịhapụ ụmụ amaala dị adị;
ọ dịghị mkpa ụlọ;
Enweghị ụtụ isi na ụtụ isi ego ụwa;
ọ dịghị mkpa maka ịnọ onwe gị mgbe ị na-edejupụta akwụkwọ maka itinye aka na mmemme ahụ;
Enweghị ihe ọ bụla chọrọ maka nyochaa, ihe achọrọ maka agụmakwụkwọ ma ọ bụ ahụmịhe njikwa;
enweghị ọrụ itinye akwụkwọ maka visa ịbanye n'ókèala nke ihe karịrị mba 146, gụnyere mpaghara Schengen, Great Britain, Hong Kong;
inweta nwa amaala n’ime oge gafere ọnwa atọ;
ikike inweta ikike ịbụ nwaamaala maka ụmụaka na-erubeghị afọ iri abụọ na ise;
nsonye nke ndị nne na nna karịrị afọ 65 na onye na-achọ akwụkwọ;
ndebanye aha nwa amaala maka ndị nwere nkwarụ bụ ndị na-elekọta ndị mmadụ (ụmụaka, nne na nna);
ókèala dị mma maka obibi ebighi ebi;
inweta akwụkwọ ikike (paspọtụ) Saint Lucia, n'ime oge anaghị agafe ọnwa 3.
Otu esi enweta ụmụ amaala nke Saint Lucia:
1. Site na itinye ego na National Development Fund (atụmatụ - enweghị ike ịgbanwe agbanwe):
$ 100 puku - maka onye na-achọ isi;
$ 165 puku - maka onye na-achọ isi tinyere nwunye ma ọ bụ nwunye;
$ 190 puku - maka onye isi akwụkwọ tinyere nwunye ma ọ bụ di na nwunye gbakwunyere ụmụ 2;
$ 25 puku - n'ihi na onye ọ bụla ụdi onye na-elekọta.
2. Site n’itinye ego na ala na ụlọ
Iji nweta ụmụ amaala nke Saint Lucia, ọ dị mkpa ịzụta ala na ngụkọta uru nke ọ dịkarịa ala $ 300 puku, ihe a kwuru ga-enwe na ọ dịkarịa ala afọ 5. A na-akwụ ụgwọ mmefu ihe onwunwe, ndebanye aha na ụtụ isi karịa nke ihe onwunwe.
3. Ego nke ulo oru iwu nke Saint Lucia
Applicantsmụ amaala chọrọ itinye ego ma ọ dịkarịa ala US $ 3.5 maka ịzụta, ịhazi ma ọ bụ sonye na ụlọ ọrụ iwu Saint Lucia. Ọ dịkarịa ala ụmụ amaala 3 nke Saint Lucia ga-etinye aka na ọrụ nke ụlọ ọrụ iwu. Maka ndị na-achọ mmadụ abụọ, ego a bụ UC $ 6 nde. Ọ dịkarịa ala ụmụ amaala 6 nke Saint Lucia ga-esonye na ọrụ nke ụlọ ọrụ iwu.
Otu ndi oru ngo akwadoro:
ebe nri pụrụ iche;
ụgbọ mmiri na marina;
ọdụ ụgbọ mmiri, akwa, okporo ụzọ na okporo ụzọ;
alụmdi, Ọdịdị nke a na sayensị nnyocha ọdịdị;
4. Ọchịchị gọọmentị
Ndị na-achọ maka ụmụ amaala ga-etinye ego na:
500 puku US $ - maka onye isi na-achọ;
535 puku US $ - maka onye anamachọ ihe tinyere di na nwunye;
550 puku US - maka onye anamachọ isi tinyere nwunye ma ọ bụ di na nwunye gbakwunye ụmụ 2;
25 puku US $ - maka onye ọ bụla ọzọ na-elekọta.
Mmefu metụtara na ịlele maka itinye aka na mpụ:
7 US $ - maka onye isi,
US $ 5 - maka ndị dabere karịa afọ 000.
- ọ bụrụ na itinye ego:
$ 2 puku - maka isi ocho oru;
$ 1 puku - maka mgbakwunye dabere.
- mgbe ịzụrụ ala na ụlọ:
$ 50 puku - maka isi ocho oru;
$ 35 puku - maka di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ nwunye, ụmụaka ọ dịkarịa ala afọ 18;
$ 25 puku - maka ụmụaka n'okpuru afọ 18.